Dhuusamareeb: Wariye lugu xukumay Lix bilod oo xarig ah |
Dhuusamareeb: Wariye lugu xukumay Lix bilod oo xarig ah
Dhuusamareeb: Wariye lugu xukumay Lix bilod oo xarig ah,Axad, September, 30, 2018 (GNN) –Maxkamadda ciidamadda qalabka sida ee Galmudug ayaa xabsi lix bilood ah ku xukuntay wariye ku eedeysnaa inuu faafiyay warar ka dhan ah dowlad-gobolleedka.
Afhayeenka maxkamadda,Galad Maxamed Qayliye oo xukunka ku dhawaaqay wuxuu sheegay wariye Maxamed Cabdiwali Tooxow inuu faafiyay warar aan xaqiiqo ahayn, sida u sheegay.
“Tooxow wuxuu ka sii daayay raadiyaha Kulmiye ee magaalada Muqdisho in al-Shabaab ay maamulan inta badan deegaannada Galmudug iyo inay la wareegeen deegaanno.. waxaa inta dheer oo uu baahiyay in dadka ka tirsan jabhadda ONLF laga qabqabto Galmudug oo Itoobiya lagu wareejiyo, waa been abuur wararka oo dhan.” ayuu yiri afhayeenka maxkamadda ciidamadda qalabka sida ee Galmudug.
Wariye Maxamed Cabdiwali Tooxow , oo siddeedii maalin ee u dambeysay ku xirnaa xabsiga degmada Dhuusamareeb ayaa raadiyaha maxalliga ah ee Kulmiye oo saldhigiisu yahay magaalada Muqdisho uga soo warrami jirin magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna noqonaya saxafigii ugu horreeyay ee lugu xiro degmada tan iyo inta ay maamulka ku midoobeen Galmudug iyo Ahlu Sunna.